Nnukwu onye na -emepụta akwa na resin akwa Dongli
Ngwakọta ihe ndina agwakọtara
Resins Ụdị ahụ na Ọdịdị Ihe mejupụtara ỌrụOtu Ionic Ụdị Mkpokọta ikike mgbanwe meq/ml Ọdịnaya Mmiri Ntughari Ion Oke olu Ibu ibu arọ g/L Nguzogide
MB100 Kpochapụ Mpekere Ọdịdị Gel SAC R-SO3 H+ 1.0 55-65% 99% 50% 720-740 > 10.0 MΩ
MB101 Kpochapụ Mpekere Ọdịdị Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 40% 710-730 > 16.5 MΩ
MB102 Kpochapụ Mpekere Ọdịdị Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 30% 710-730 > 17.5 MΩ
MB103 Kpochapụ Mpekere Ọdịdị Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% 1 * 710-730 > 18.0 MΩ*
MB104 Kpochapụ Mpekere Ọdịdị Gel SAC R-SO3 H+ 1.1 55-65% 99% Ọgwụgwọ Mmiri jụrụ oyi n'ime
Ihe odide ala ala peeji * Nke a bụ nha; Ịchacha mma mmiri:> 17.5 MΩ cm; TOC <2 ppb
Nnukwu mmiri dị ọcha agwakọtara akwa resin nwere ụdị jel dị ike resin mgbanwe cation acid resin na resin mgbanwe alkali anion siri ike, ma emezigharị ya ma gwakọta ya.
A na -ejikarị ya eme ka mmiri dị ọcha, ịkwadebe mmiri dị ọcha maka ụlọ ọrụ eletrọnịkị, yana akwa akwa agwakọtara nke ọma nke usoro ọgwụgwọ mmiri ndị ọzọ. Ọ dabara maka ubi ọgwụgwọ mmiri dị iche iche nwere nnukwu chọrọ mmiri na enweghị ọnọdụ nrụpụta dị elu, dị ka akụrụngwa ngosi, diski ike mgbako, CD-ROM, bọọdụ sekit ziri ezi, akụrụngwa elektrọnik na ụlọ ọrụ ngwaahịa elektrọnik nke ọzọ, ọgwụ na ọgwụgwọ, ụlọ ọrụ ntecha, ụlọ ọrụ nrụpụta nkenke, wdg
Ojiji ndị na -egosi ntụaka
1, oke pH: 0-14
2. Ọnọdụ okpomọkụ kwere: ụdị sodium ≤ 120, hydrogen ≤ 100
3, ọnụego mgbasa%: (Na + ruo H +): ≤ 10
4. Ogo akwa resin ụlọ ọrụ dị M: ≥ 1.0
5, ịta mgbapụta mmeghachi omume%: nacl6-10hcl5-10h2so4: 2-4
6, regenerant dosage kg / m3 (ngwaahịa ụlọ ọrụ dị ka 100%): nacl75-150hcl40-100h2so4: 75-150
7, mmụba mmụba mmiri M / h: 5-8
8, oge ịkpọtụrụ oge m inute: 30-60
9, ọnụego nsacha M / h: 10-20
10, oge ịsa oge: ihe dị ka 30
11, ọnụego arụmọrụ M / h: 10-40
12, ikike mgbanwe ọrụ mmol / L (mmiri): mweghachi nnu ≥ 1000, mweghachi mmiri hydrochloric ≥ 1500
A na -ejikarị resin akwa agwakọtara na ụlọ ọrụ na -eme ka mmiri dị ọcha maka polishing usoro mmiri iji nweta ịdịmma mmiri (dị ka mgbe osmosis sụgharịrị). Aha akwa agwakọtara gụnyere resin acid cation siri ike na resin mgbanwe anion siri ike.
Ọrụ nke Resin Bed Mixed
Deionization (ma ọ bụ imebi ihe) pụtara naanị mwepụ nke ion. A na -ebo ebubo ma ọ bụ ụmụ irighiri ihe dị na mmiri nwere ebubo na -adịghị mma ma ọ bụ nke dị mma. Maka ọtụtụ ngwa na -eji mmiri dị ka ihe na -agba mmiri ma ọ bụ akụrụngwa, ion ndị a na -ahụta ka adịghị ọcha, a ga -ewepụrịrị ya na mmiri.
A na -akpọ ion ndị na -akwụ ụgwọ nke ọma cations, na ion ebubo na -adịghị mma na -akpọ anions. Resin mgbanwe resin na -agbanwe cations na anions achọghị na hydrogen na hydroxyl iji mepụta mmiri dị ọcha (H2O), nke na -abụghị ion. Ihe ndị a bụ ndepụta nke ion nkịtị na mmiri ime obodo.
Ụkpụrụ ọrụ nke Resin Bed Mixed
A na -eji resin akwa agwakọtara iji mepụta mmiri deionized (demineralized ma ọ bụ "Di"). Resins ndị a bụ obere beads plastik nke nwere eriri polymer nke nwere ụgwọ ọrụ arụ ọrụ agbakwunyere na chaplet. Otu ọ bụla na -arụ ọrụ nwere ụgwọ dị mma ma ọ bụ adịghị mma.
Resin cationic nwere otu arụ ọrụ na -adịghị mma, yabụ na ha na -adọta ion dị mma. Enwere ụdị resin cation abụọ, cation acid na -adịghị ike (WAC) na cation acid siri ike (SAC). A na -ejikarị resin cation na -adịghị ike maka ikwu okwu na ngwa ndị ọzọ pụrụ iche. Ya mere, anyị ga -elekwasị anya na ọrụ resin cation siri ike nke ejiri na -emepụta mmiri deionized.
Resin anionic nwere otu ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma, yabụ na -adọta ion ebubo na -adịghị mma. Enwere ụdị resin anion abụọ; Anion base na -adịghị ike (WBA) na anion base siri ike (SBA). A na -eji ụdị resin anionic abụọ arụpụta mmiri deionized, mana ha nwere njirimara ndị a dị iche iche:
Mgbe ejiri ya na sistemụ akwa agwakọtara, WBA resin enweghị ike wepu silica, CO2 ma ọ bụ nwee ikike iwepụ acid na -adịghị ike, ma nwee pH dị ala karịa na -anọpụ iche.
Resin bed agwakọtara na -ewepụ anions niile dị na tebụl dị n'elu, gụnyere CO2, ma nwee pH na -anọpụ iche karịa mgbe ejiri ya na sistemụ akwa nwere onwe abụọ n'ihi ịwụfu sodium.
A na -eji res na Sac na SBA n'ime akwa agwakọtara.
Iji mepụta mmiri deionized, a na -emegharị resin cation na hydrochloric acid (HCl). Hydrogen (H +) na -akwụ ụgwọ nke ọma, yabụ na ọ na -etinye onwe ya na chaplet resin cationic ebubo adịghị mma. A na -emegharị resin anion na NaOH. A na -ebo otu hydroxyl (OH -) ebubo na -adịghị mma ma tinye onwe ha na chaplet resion anionic nke ọma.
A na -adọta ion dị iche iche na bekee resin nwere ike dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, calcium na -adọta bekee resin cationic siri ike karịa sodium. Hydrogen dị na beads resin cationic na hydroxyl na beads anionic enweghị mmasị siri ike na beads. Nke a bụ ihe mere eji anabata mgbanwe mgbanwe ion. Mgbe cation na -akwụ ụgwọ dị mma na -agafe na bekee resin cationic, mgbanwe mgbanwe cation bụ hydrogen (H +). N'otu aka ahụ, mgbe anion nwere ụgwọ na -adịghị mma na -esi na bekee resin anion, mgbanwe anion na hydroxyl (OH -). Mgbe ị jikọtara hydrogen (H +) na hydroxyl (OH -), ị na -etolite H2O dị ọcha.
N'ikpeazụ, a na -eji saịtị mgbanwe niile dị na cation na beads resion, tankị ahụ anaghịzi emepụta mmiri deionized. N'oge a, ọ dị mkpa ka emezigharị bekee resin maka iji ya mee ihe ọzọ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ resin akwa agwakọtara?
Ya mere, ọ dịkarịa ala ụdị resin mgbanwe ion dị mkpa iji kwadebe mmiri mgbapụta na ọgwụgwọ mmiri. Otu resin ga -ewepụ ion ebubo ebubo nke ọma yana nke ọzọ ga -ewepụ ion ebubo na -adịghị mma.
N'ime sistemụ akwa agwakọtara, resin cationic na -adị na mbụ. Mgbe mmiri ime obodo na -abanye na tank nke juputara na cation, ihe mkpuchi cha cha niile na -amasị ya wee gbanwere ya maka hydrogen. Agaghị adọta ndị anions nwere ụgwọ adịghị mma wee gafee chaplet resin. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị lelee chloride calcium n'ime mmiri nri. Na ngwọta, a na -akwụ ụgwọ ion calcium nke ọma ma tinye onwe ha na bekee cationic iji hapụ ion hydrogen. Chloride nwere ụgwọ adịghị mma, yabụ na ọ naghị etinye onwe ya na bekee resin cationic. Hydrogen nwere ụgwọ dị mma na -etinye onwe ya na ion chloride iji mepụta acid hydrochloric (HCl). Mgbapụta nke sitere na onye na -ebubata akpa ga -enwe pH dị ala yana conductivity dị elu karịa mmiri oriri na -abata.
Ihe na -agbapụta resin cationic bụ acid siri ike na acid adịghị ike. Mgbe ahụ, mmiri acid ga -abanye na tank jupụtara na resin anion. Resin anionic ga -adọta anions ebubo adịghị mma dị ka ion chloride wee gbanwee ha maka otu hydroxyl. Nsonaazụ ya bụ hydrogen (H +) na hydroxyl (OH -), nke bụ H2O
N'ezie, n'ihi 'ịwụfu sodium', sistemụ akwa agwakọtara agaghị emepụta ezigbo H2O. Ọ bụrụ na sodium awụpụ site na tankị mgbanwe cation, ọ na -ejikọ ya na hydroxyl wee mepụta sodium hydroxide, nke nwere conductivity dị elu. Mgbapu mmiri sodium na -eme n'ihi na sodium na hydrogen nwere mmasị nke ukwuu na bekee resin cationic, na mgbe ụfọdụ ion sodium anaghị agbanwere ion hydrogen n'onwe ha.
N'ime sistemụ akwa agwakọtara, a na -agwakọta cation acid siri ike na resin anion siri ike. Nke a na -enyere tankị agwakọtara agwakọta ka ọ rụọ ọrụ dị ka puku puku ngwakọta agwakọta n'ime tank. Emeghachiri mgbanwe cation / anion na akwa resin. N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mgbanwe mgbanwe cation / anion ugboro ugboro, nsogbu nke ịwụfu sodium ka edozi. Site n'iji akwa agwakọtara ọnụ, ị nwere ike wepụta mmiri deionized kacha mma.
Nke gara aga: Resin mgbanwe cation acid siri ike
Osote: Mkpụrụ ndụ Inert na Polymer